Unokuzuza njani ngokuthengisa i-backlinks?
Kukho abantu abaninzi abafuna amathuba okufumana imali kwi-intanethi. Enye inkonzo efunekayo kakhulu enokuyenza kuyo i-backlinks yokuthengisa. Abaninzi abathengisi be-intanethi bakulungele ukuhlawula imali enkulu ukuthumela izixhumanisi. Awudingi ukuba ube newebhusayithi yakho, okanye uthengise ezinye iimveliso okanye iinkonzo. Ngaphezu koko, akudingeki wenze nayiphi na imisebenzi yangempela. Yonke into oyifunayo iikopi ezithatha umxholo ofunekayo kunye ne-URL echanekileyo kuma-akhawunti ahlukeneyo aseburhulumenteni, iiblogi, iiforam kunye nemithombo yoluntu. Nangona kunjalo, kuyavakala ukuba kuhle ukunyaniseka. I-backlinks ezithengisayo akuyiyo into ekufuneka uyenze kuyo. Ewe, unako ukuphakamisa imali ekuthengiseni i-backlinks. Nangona kunjalo, kukho izizathu ezingaphezu kweyodwa ukuba kutheni akufanelekanga ixesha kunye nemizamo.
Kule nqaku, siza kuxubusha ngeendlela ezikhoyo zokufumana imali ekuthengiseni i-backlinks nendlela yokuphepha izigwebo ekubandakanyekeni kule mi sebenzi.
Ngubani onokukuhlawula ngokuthumela ikhonkco?
Masiqwalasele ngokuthe ngqo ukuba ngubani onokufuna ikhonkco yokuthumela iinkonzo, kwaye kutheni ukuba ukulungele ukuhlawula wena.
Inani elikhulu lemashishini e-intanethi zihlala ziphakamileyo kwiziphumo zophando kwaye zifumane ukuhamba rhoqo kwezinto eziphilayo (ukukhangela) kwimizila yabo yewebhu. Ubume obulungileyo kuthetha abathengi abathengi, kwaye emva koko, abathengi abaninzi bathetha igunya eliphezulu lokuthengisa, ukuguqulwa, kunye neengeniso. Indlela epheleleyo yokufumana inqanaba eliphezulu kwi-SERP kukufumana iinqununu kwiwebhusayithi yakho. Ezi zintlanzi zikhonza njengevoti zabanye abantu kwaye zibonisa iinjongo zokukhangela ukuba indawo yakho inokwethenjelwa, inokuthenjwa kunye negunya. Ngaloo mqondiso yeenjini zokukhangela zakha uluvo lwazo malunga nekhwalithi yakho yesayithi kwaye ziqale ukubeka indawo yakho phezulu kwi-SERP. Kwiminyaka emininzi edlulileyo, abathengisi be-intanethi baqikelele ukuba banokuthenga kuphela "iivoti" zabo kwiimimandla ukuphucula izikhundla zabo nokuphakamisa ulwazi.
Kungekudala, kwakuyindlela efanelekileyo yokufumana i juyisi, kodwa ngoku ayisebenzi. I-Google ishintshile i-algorithm yesimo sayo kwaye yakha isihlunu sePenguin esifumana kwaye sihlawulise iiwebhusayithi ezibandakanya kwimisebenzi enjenge-backlink yokuthenga. Kukho abanikazi bewebhusayithi abanomdla kwi-link yokuthumela, kodwa kwiintsuku zethu le shishini libhekwa njengelifile. Iinjongo zophando zizalisa izigidi ekukhuseleni abantu ukuba baphumelele ekusebenziseni izakhiwo zokuqhagamshelana neziqhelo ezingaqhelekanga. I-Google, umzekelo, ibonisa ukuba iinqununu ezihlawulwayo aziyi kugunyazisa igunya lewebhusayithi kwaye ayikwazi ukuchaphazela i-domain PageRank. Ukongezelela, iifayile ze-injini zokusesha zanamhlanje zihlakaniphe kwaye ziyakwazi ukubona ukuba yeyiphi iwebhsayithi ejongene nokuthengwa kwekhonkco. Kuthetha ukuba i-Google iza kukubonisa kwaye ikuhlawulise iinqununu ezihlawulwe ngokunciphisa isikhundla sakho sokuma. Ngokuthenga i-juice ye-link, ungonakalisa yonke imizamo yakho yokuphucula injini.
Namhlanje, iinkampani ezinendlela efanelekileyo yokukhuthazwa kwe-intanethi azizithengi i-backlinks njengoko ziyazi indlela engengozi ngayo kwi-intanethi yabo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuthetha ukuba amanye amashishini angabonakaliyo ukuzama ukuphula imithetho kunye nokukhohlisa iGoogle ngokuthenga i-juice ye-link ye-organic kwiwebhusayithi yazo Source .